Bahan International Science Academy https://www.bisa.edu.mm Bahan International Science Academy Tue, 07 Apr 2020 09:47:35 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.4.2 https://www.bisa.edu.mm/wp-content/uploads/2019/05/cropped-logo-32x32.png Bahan International Science Academy https://www.bisa.edu.mm 32 32 Online Learning Guidelines https://www.bisa.edu.mm/2020/04/07/online-learning-guidelines/ https://www.bisa.edu.mm/2020/04/07/online-learning-guidelines/#respond Tue, 07 Apr 2020 09:47:02 +0000 http://www.bisa.edu.mm/?p=16324
]]> https://www.bisa.edu.mm/2020/04/07/online-learning-guidelines/feed/0Google Classroom https://www.bisa.edu.mm/2020/04/07/google-classroom/ https://www.bisa.edu.mm/2020/04/07/google-classroom/#respond Tue, 07 Apr 2020 09:34:34 +0000 http://www.bisa.edu.mm/?p=16295 https://www.bisa.edu.mm/2020/04/07/google-classroom/feed/0Bahan International Science Academy will be closed effective on 18th March, 2020 to 30th April 2020 https://www.bisa.edu.mm/2020/03/17/bahan-international-science-academy-will-be-closed-effective-on-18th-march-2020-to-30th-april-2020/ https://www.bisa.edu.mm/2020/03/17/bahan-international-science-academy-will-be-closed-effective-on-18th-march-2020-to-30th-april-2020/#respond Tue, 17 Mar 2020 10:32:18 +0000 http://www.bisa.edu.mm/?p=16257
The health and safety of our students is our primary concern at all times. As you are aware The World Health Organization (WHO) has declared COVID -19 asapandemic and the government of Myanmar has issued advisory statements to close all schools’ classes temporarily.
Following the Ministry of Education statement, Bahan International Science Academy will be closed effective on 18th March, 2020 to 30th April 2020. Our teachers will be engaged in professional learning from 18th March, 2020 to 20th March 2020. During this time there will not be any physical or virtual classes for students.
We expect to start online teaching effective on 23 March 2020 to our all students.
Parents will receive further notifications with updates about our online continuous learning plan and the status of possible school regular classes recommencement date.
Please, do not hesitate to contact our office for further clarifications.
We ask for understanding and cooperation in this matter.
ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား၏ ကနျြးမာရေးနှငျ့ဘေးအန်တရယျကငျးရှငျးရေးသညျ ကြှနျုပျတို့အတှကျ ပထမဦးစားပေးကဏ်ဍဖွဈပါသညျ။ ကမ်ာဘ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အစညျး(WHO) မှ COVID-19 အား ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါအဖွဈ ကွငွောထားပွီး မွနျမာနိုငျငံပွညျထောငျစုအစိုးရ အဖှဲ့မှ မွနျမာနိုငျငံတဝှမျးလုံးရှိကြောငျးမြားအား ခတ်ေတယာယီပိတျထားပေးပါရနျ ညှနျကွားခကျြထုတျပွနျထားသညျကို မိဘမြားသိရှိထားမညျဖွဈပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံပညာရေးဝနျကွီးဌာန၏ ကွငွောခကျြ အရ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား၏ ဘေးကငျးလုံခွုံရေးကို ရှေးရှုသောအားဖွငျ့ Bahan International Science Academy အား မတျလ (၁၈) ရကျနမှေ့ ဧပွီလ (၃၀) ရကျနအေ့ထိ ခတ်ေတယာယီပိတျထားမညျဖွဈပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့၏ ဆရာ/ဆရာမမြားသညျ မတျလ (၁၈) ရကျနမှေ့ မတျလ (၂၀) ရကျနအေ့ထိ သငျကွားမှုမွှငျ့တငျရေးအစီအစဉျမြားအား ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပါသောကွောငျ့ ၎င်းငျးရကျမြားအတှငျး ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားအတှကျ အတနျးခြိနျမြား၊ Online သငျကွားခွငျးအစီအစဉျမြား ရှိမညျမဟုတျပါ။
ကြှနျုပျတို့၏ ကြောငျးသားကြောငျးသူ မြား စဉျဆကျမပွတျလလေ့ာသ ငျယူနိုငျရနျအတှကျ online မှ သငျကွားခွငျးအား မတျလ (၂၃) ရကျ နမှေ့စတငျသငျကွားပေးရနျ ရညျရှယျထားပါသညျ။
ယခုအစီအစဉျမြားသညျ ယာယီလုပျဆောငျခကျြသာဖွဈပွီး online သငျကွားမှုဆိုငျရာ အစီအစဉျမြားနှငျ့အတူ ပုံမှနျအတနျးမြား ပွနျလညျဖှငျ့လှဈနိုငျခွငျးနှငျ့ပတျသကျသညျ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကိုလညျး မိဘမြားထံသို့ ဆကျသှယျပေးပို့နမေညျဖွဈပါသညျ။
အားလုံး ဘေးကငျးလုံခွုံကွပါစကွေောငျး ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးအပျပါသညျ။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပထမဦးစားပေးကဏ္ဍဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း(WHO) မှ COVID-19 အား ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ် ကြေငြာထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးရှိကျောင်းများအား ခေတ္တယာယီပိတ်ထားပေးပါရန် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို မိဘများသိရှိထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြေငြာချက် အရ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ရှေးရှုသောအားဖြင့် Bahan International Science Academy အား မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့မှ ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့အထိ ခေတ္တယာယီပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာ/ဆရာမများသည် မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့မှ မတ်လ (၂၀) ရက်နေ့အထိ သင်ကြားမှုမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များအား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ၄င်းရက်များအတွင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အတန်းချိန်များ၊ Online သင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်များ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောင်းသားကျောင်းသူ များ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသ င်ယူနိုင်ရန်အတွက် online မှ သင်ကြားခြင်းအား မတ်လ (၂၃) ရက် နေ့မှစတင်သင်ကြားပေးရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
ယခုအစီအစဉ်များသည် ယာယီလုပ်ဆောင်ချက်သာဖြစ်ပြီး online သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့်အတူ ပုံမှန်အတန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း မိဘများထံသို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အားလုံး ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးအပ်ပါသည်။
]]> https://www.bisa.edu.mm/2020/03/17/bahan-international-science-academy-will-be-closed-effective-on-18th-march-2020-to-30th-april-2020/feed/0High quality education, outstanding achievements, and facilities https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/high-quality-outstanding-achievements-and-facilities/ https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/high-quality-outstanding-achievements-and-facilities/#respond Mon, 25 Nov 2019 03:30:15 +0000 http://www.bisa.edu.mm/?p=15845 ]]> https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/high-quality-outstanding-achievements-and-facilities/feed/0Dedicated and caring international and local teachers https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/dedicated-and-caring-international-and-local-teachers/ https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/dedicated-and-caring-international-and-local-teachers/#respond Mon, 25 Nov 2019 03:29:40 +0000 http://www.bisa.edu.mm/?p=15842 ]]> https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/dedicated-and-caring-international-and-local-teachers/feed/0Well-disciplined school environments https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/well-disciplined-school-environments/ https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/well-disciplined-school-environments/#respond Mon, 25 Nov 2019 03:29:07 +0000 http://www.bisa.edu.mm/?p=15839 ]]> https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/well-disciplined-school-environments/feed/0Friendly and helpful staff https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/friendly-and-helpful-staff/ https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/friendly-and-helpful-staff/#respond Mon, 25 Nov 2019 03:28:33 +0000 http://www.bisa.edu.mm/?p=15836 ]]> https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/friendly-and-helpful-staff/feed/0Up-to-date school library https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/up-to-date-school-libraries/ https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/up-to-date-school-libraries/#respond Mon, 25 Nov 2019 03:27:57 +0000 http://www.bisa.edu.mm/?p=15833 ]]> https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/up-to-date-school-libraries/feed/0Science, Physics, Biology, and Chemistry laboratories https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/science-physics-biology-and-chemistry-laboratories/ https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/science-physics-biology-and-chemistry-laboratories/#respond Mon, 25 Nov 2019 03:27:22 +0000 http://www.bisa.edu.mm/?p=15830 ]]> https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/science-physics-biology-and-chemistry-laboratories/feed/0Internationally acclaimed curricula https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/cambridge-and-ib-curricula-to-suit-students-needs/ https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/cambridge-and-ib-curricula-to-suit-students-needs/#respond Mon, 25 Nov 2019 03:26:19 +0000 http://www.bisa.edu.mm/?p=15827 ]]> https://www.bisa.edu.mm/2019/11/25/cambridge-and-ib-curricula-to-suit-students-needs/feed/ 0